Sina Telo miasa ho mpanamboatra lohan-doha | Chengpai
Isa maodely CP-3T-RQ01
Lohan'ny fandroana tànana 304 vy vy, silika
Hose fandroana tànana 304 vy vy, plastika
Lanja milanja (kg) 7.90
Lanja mavesatra (kg) 8.50
Misy jiro LED tsy misy
1.Ltra manify, matevina 2mm.
2.Solid fananganana vy vy 304.
3.Mora madio. Ny savoka slicon dia azo fafana haingana.
4. Lafarin'efy telo: rotsakorana ambony, riandrano, fandroana tànana.
Ity fandroana efamira mahitsizoro overhead ity dia efitra fandroana marobe ilaina ary tena mety amin'ny fandroana ankehitriny. Izy io dia manome riaka mahery miaraka amina lasitra telo, riandrano, rotsakorana ambony ary fandroana tanana. Manampy refy vaovao amin'ny fandroana anao izy, apetraka amin'ny rindrin'ny fandroanao, ny rano mamelombelona dia zaraina amin'ny vatanao iray manontolo amin'ny alàlan'ny famafazana be dia be.
Ny lohan'ny fandroana dia mirefy 560 x 230 mm, manome antoka ny filatsahan'ny orana amin'ny ambaratonga lehibe. Miaraka amin'ny endriny manify sy ny endrik'i Chrome voadio madio, manampy koa ny fikasana maoderina amin'ny trano fidiovana.
Ity fananganana orana orana ity dia vy mavesatra 304 matevina, maharitra amin'ny fanoherana ny harafesina. Ny famaranana chrome vita amin'ny endriny dia mahatonga ny loha fandroana ho tsara tarehy sy mahafinaritra miaraka amin'ny haingon-trano fandroana.
Mba hahamora ny fanadiovana azy ireo dia misy ny silipo malefaka malefaka miorina amin'ny aerator ny fandroana ambony sy fandroana tanana. Ny silipo avo lenta sy mahazaka ranomaso dia mora kosehina amin'ny alàlan'ny rantsan-tànanao. Ny limescale sy ny loto dia manjavona toy ny majia, ary mandray soa ianao amin'ny fanandramana jet jet be mandroso isaky ny mandeha. Famafazana fandroana tsara tarehy rehefa mandro sy rano mikoriana aza rehefa manasa tanana no mahatonga ireo vokatra ireo ho fifaliana ampiasaina.
Valve mando miaraka amina roa dia vita amin'ny vy tsy metaly 304, mahery sy matanjaka, tsy ho tafaporitsaka mihitsy. Ny bokotra fanaraha-maso dia fandidiana mora, mahatonga ny fandroana ho malefaka kokoa sy mirentirenty kokoa ary mamela fahatsapana mahafinaritra amin'ny hoditrao. Fanafody ho an'ny fanahy ao amin'ny spao manokana.
Ity fandroana fandroana ity dia misy fandroana ambony rano, fandroana fanasitranana tanana ary valizy fanaraha-maso. Izy io dia rindrina napetraka ary fametrahana mora tahaka ny endriny tsotra mahazatra.
Teo aloha: Tontonana fandroana poleta efamira miisa efatra nitaingina
Manaraka: Lava fantsom-by fandroana vy matevina
Zoro havanana miaraka amin'ny fampisehoana mari-pana miloko ...